Shirkadaha Lampholder & Qeybaha Wax Soo Saara & Warshadaha - Soosaarayaasha Shiinaha Lampholder & Components Components
SOCKET & COMPONENTS
SANADKA & XUQUUQDAADA
LAMPHOLDER & SHAQAALAHA
Qayb La Sameeyay
Qalabka tufaaxida loogu talagalay Mashiinka Burushka
Qaybaha Isboortiga ee loogu talagalay Mashiinka tolidda
Buundada loogu talagalay Beddelka
Qayb Gaar ah oo loogu talagalay Mashiinka
LAMPHOLDER & SHAQAALAHA 3
Midabka: Qalabka Jaalaha ah: Aluminium maaddooyinka magnesium MOQ: 200,000PCS Cufnaanta: qiyaastii 0.32mm Miisaan: qiyaastii 1.31g Dhalasho ama Dahaar ： Jaale hurdi ama Tilmaam leh NICKEL Astaamaha Muhiimka ah ： Waxaa loogu talagalay hagaajinta Lambarada, Marka macaamiisha ay isugu yimaadaan, waa inay si habsami leh u socdaan . Sidoo kale waxay istaagi kartaa xoogga weyn ee hagaajinta laambada. Haddii qaybta ay tahay toddobaad, si fudud ayaa loo dhaawici doonaa. Qaababka Tijaabada: E27 laambada Faahfaahinta kale: Dhismaha iyo naqshadaynta gudaha waxay u baahan tahay inay ahaato sidii qaybta caagga ah. Laakiin qaybtan waa in si adag loogu hagaajiyaa ...
LAMPHOLDER & SHAQAALAHA 2
Midabka: Qalabka Cas: Aluminium maaddada magnesium ee MOQ: 200,000PCS Cufnaanta: qiyaastii 0.32mm Miisaan: qiyaastii 1.31g Dhamaad iyo dalool ： Qalabka casaanka ah ee loo yaqaan 'Red COLOR AM' PLICED NICKEL ' . Sidoo kale waxay istaagi kartaa xoogga weyn ee hagaajinta laambada. Haddii qaybta ay tahay toddobaad, si fudud ayaa loo dhaawici doonaa. Qaababka Tijaabada: E27 laambada Faahfaahinta kale: Dhismaha iyo naqshadaynta gudaha waxay u baahan tahay inay ahaato sidii qaybta caagga ah. Laakiin qaybtan waa in lagu xiraa meel adag ...
LAMPHOLDER & SHAQAALAHA 1
Midabka: Qalabka Cad: Aluminium ama aluminium maaddada magnesium MOQ: 200,000PCS Cufnaanta: qiyaastii 0.32mm Miisaan: qiyaastii 1.31g Dhawr iyo Dareem ： WHITE COLOR OR PLATED NICKEL Sifooyinka muhiimka ah is Waxay u taagan tahay hagaajinta laambadda, Markii macaamiisha ay soo ururiyaan, waa inay si habsami leh u soco. Sidoo kale waxay istaagi kartaa xoogga weyn ee hagaajinta laambada. Haddii qaybtaan ay liidato, qaybtaan si fudud ayaa loo dhaawici doonaa. Qaababka Tijaabada: E27 laambada Faahfaahinta kale: Dhismaha iyo naqshadaynta gudaha waxay u baahan tahay inay ahaato sidii qaybta caagga ah. Laakiin qaybtani waa inay ...
1.Total 11 qaybood dhamaan. 2.1pcs Fiilo go'an + 1pcs Naxaas aad u balaaran oo balaaran + 1pcs Naxaas yar oo siman + 4pcs cad Screw for lampholder + 2pcs Jaleec huruud ah oo isku xira labajibbaarane + 2pcs Iskuxiraha Square. 3.MOQ: 500,000sets. 4.Pls nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah.
Rm.1405, Hai Guang Mansion, No.298, Wadada Zhongshan West, Ningbo, China